भगवान बुद्ध विष्णुका नवौं अवतार होइनन्, गलत प्रचार भएको छ (भिडियोसहित) | नेपाल आज
भगवान बुद्ध विष्णुका नवौं अवतार होइनन्, गलत प्रचार भएको छ (भिडियोसहित)
अरु धर्मले स्वर्ग, नर्कको वर्णन गरेर आतंक सिर्जना गर्छ
आइतबार, २८ जेठ २०७४ गते प्रकाशित
डा. शारदा पौडेल
अरु धर्मले स्वर्गको बयान गर्छन्, नर्कको वर्णन गरेर डर देखाउँछन् । तर बुद्धधर्ममा अनुयायीलाई डर देखाइँदैन । भगवान बुद्धले प्रवचनमै भन्नु भएको छ कि पहिले आऊ, परीक्षण गर, सत्य लाग्यो भने अनुशरण गर । तर अन्य धर्ममा विश्वास गर मात्रै भनिन्छ । सत्य होस नहोस विश्वास गर भन्न छाडिन्न ।
कतिपय देशहरुले राजधर्मको रुपमा पनि बुद्ध धर्मलाई अपनाएका छन् । यसो भनिरहँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय के हो भने सुरुमा बुद्धको उपदेश, प्रवचन, शिक्षालाई अनुशरण गरिन्थ्यो । यसलाई बाँच्ने कलाको रुपमा उपयोग गरिन्थ्यो । पछि गएर बुद्धको शिक्षा अनुशरण गर्नेहरुले यो पद्धतिलाई धर्मको रुपमा रुपान्तरण गरे ।
अन्य धर्ममा जस्तै बुद्धधर्ममा पनि कर्मकाण्ड पसेको छ । केही ढोङहरु बुद्ध धर्ममा पनि छन् । कतिपयले आफूलाई गृहस्थ भिक्षु पनि भन्ने गरेका छन् । भगवान बुद्धले मांस, मदिरा, मत्स्य सेवनमा रोक लगाउनु भएको थियो । नखानू भन्नु भएको थियो । तर त्यस्ता कुरा उनीहरु खान्छन् । भगवान बुद्धले पनि खानु भएको थियो भन्ने बहाना देखाएर उनीहरु खान्छन् ।
भगवान बुद्धको उपासक हुँ भन्नेले पनि कर्मकाण्ड गरेको देखिन्छ ।
बुद्ध विष्णुका नवौं अवतार होइनन्
भगवान बुद्धलाई विष्णुको नवौं अवतारको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । तर यो विषय चर्चा गरिएको वा भारत, नेपाल तिरका हिन्दूहरुले नवौं अवतारको रुपमा उल्लेख गरेको मात्रै हो । विश्वासयोग्य हिन्दूधर्मग्रन्थहरुमा यस विषयमा उल्लेख छैन । बुद्धलाई विष्णुको नवौं अवतार मान्नु पर्ने कुनै आधार, प्रमाण र कारण देख्दिनँ ।
(लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. शारदा पौडेलले भिडियो अन्तर्वार्तामा व्यक्त गर्नुभएको धारणाको केही अंश हो यो । पूर्ण अन्तर्वार्ता भिडियो लिंकमा हेर्न सकिन्छ ।सं.)
कृष्णदास महाराजः महायोगी कि महाढोंगी ? (भिडियो सहित)
क्यान्सर–औषधीको अवैध धन्दा
डनदेखि मन्त्रीसम्म बनेका श्रममन्त्रीको रोचक प्रेम कहानी